July 2017 – Page2– Mero UK
July 12, 2017 August 12, 2017 / News / By Admin
– काँक्रोमा पानीको मात्रा ९६ प्रतिशत हुन्छ, मानिसमो शरीरमा पानी आपूर्ति गर्न काँक्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। – सूर्यको किरणद्वारा उत्पन्न हुने समस्याका लागि काँक्रो लाभदायी हुन्छ । यसको बोक्रामा नै म्याग्नेसियम, पोटासियम र सिलिकनजस्ता तत्व हुन्छन् । यहीकारण यसलाई स्पा उपचारका लागि प्रयोग गरिन्छ। – यसले शरीरमा भएको हानिकारक तत्वलाई प्रभावकारी रुपमा बाहिर निकाल्छ । …
काँक्रोका १५ रोचक तथ्य र स्वास्थ्यमा अाश्चार्यजनक फाइदा Read More »
नवजात शिशुको फोटो खि‌ंच्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो नगर्नुस्
July 12, 2017 July 12, 2017 / News / By Admin
डा. मेघा मिश्र काठमाडौं । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर फोटो खिच्दा पनि बच्चालाई इन्फेक्सन हुन्छ । आजभोलि जन्मिन नपाउँदै बच्चाको फोटो खिच्ने र फेसबुकमा राख्ने चलन छ । तर, यो राम्रो होइन । भर्खरै जन्मेको बच्चाको आँखा सेन्सेटिभ हुन्छ, मोबाइलको लाइटले गर्दा आँखामा विभिन्न समस्या हुनुका साथै पछि आँखा नदेख्ने समेत हुन्छ । बच्चा …
नवजात शिशुको फोटो खि‌ंच्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो नगर्नुस् Read More »
सिटिजन एड्भाइस ब्युरो (Citizen Advice Bureau) भनेको के हो र यसले के गर्छ ?
सिटिजन एड्भाइस ब्युरो (Citizen Advice Bureau) भनेको के हो र यसले के गर्छ ? यूकेभरिमा ७०० वटा स्वतन्त्र सिटिजन एड्भाइस ब्युरो (Citizen Advice Bureau) छन् (जो National Association of Citizens Advice Bureaux (NACAB) को सदस्य हुन्) र आफ्नो करीब १ हजार केन्द्रहरुबाट स्थानीय समुदायको बिभिन्न समस्याहरुलार्इ आफूसँग भएको श्रोतमार्फत् सम्बोधन गर्दछ । सिटिजन एड्भाइस ब्युरो …
सिटिजन एड्भाइस ब्युरो (Citizen Advice Bureau) भनेको के हो र यसले के गर्छ ? Read More »